Medaly 19 no nentin’ny ekipan’i Azerbaijàna nody avy any amin’ny lalao Paralaimpika · Global Voices teny Malagasy
Tao anaty lisitr'ireo firenena 10 nahazo medaly erantany i Azerbaijana
Voadika ny 23 Septambra 2021 16:17 GMT
“Saina paralaimpika mihofahofa eo ivelan'ny Eland House” an'ny Ministeran'ny Trano Fonenana, ny Fiarahamonina ary ny Governemantam-Paritra. lisansa CC BY-ND 2.0
Tamin'ny fiafaran'ireo Lalao Paralaimpika fanao amin'ny Lohataona, andiany faha-16 tao Tokyo, nody an-tanindrazany ny iray tamin'ireo firenena 86 nandray anjara, ary tena nirehareha manokana mihitsy: Azerbaijana. 19 no fitambaran'ireo medaly azon'ilay ekipa: 14 volamena, 1 volafotsy ary 4 alimo. Ny zavabitany dia nahafahany niantoka ny laharana faha-10 tamin'ny filaharana ankapobeny tamin'ny fahazoana medaly tamin'ireo lalao natao tamin'ity taona ity.
Miavaka ny fandraofan'i Shina medaly nandritra ireo Lalao #Paralaimpika — mihoatra ny avo roa heny ny isan'ireo medaly volamena raha mitaha amin'ny an'ny Britanika nahazo laharana faharoa.
(Nanao izay faraheriny koa i Azerbaijana mba ho isan'ireo folo voalohany!) pic.twitter.com/TpcYI0EXtB
Tantaram-pahombiazana ho an'ny ekipam-pireneny iny satria 35 ireo atleta nisolo tena tamina taranja enina: atletisma, judo, taekwondo, fibatàna fonjamby, tifitra ary lomano.
Araka ny voalazan'ny Azeridaily, betsaka kokoa ireo medaly azon'ny ekipa tamin'ity taona ity raha ampitahaina amin'ny fitambaran'ny azon-dry zareo tamin'ireo Lalao Paralaimpika dimy tany aloha. Sambany i Azerbaijana no niditra tamin'ireo Lalao fony tao Atlanta tamin'ny 1996, nandefa atleta roa. Nanamontsana zavabita tsara indrindra miisa efatra ihany koa ilay ekipa paralaimpika tamin'ity indray mandeha ity.
Tamin'ny 1952 no natao ny fifaninanana Para voalohany indrindra, araka ny lazain'ny tranonkalan'ny lalao. Valo taona taorian'io, Rôma no nandray ny Lalao Paralaimpika voalohany nahitana fitambaran'atleta niisa 31. Efa dingana lavitra no vitan'ny fanatanjahantena nanomboka hatreo. Tamin'ny 2020, mihoatra ny 1.000 ireo atleta nifaninana tanatin'ireo lalao nahitàna solontena avy amin'ny firenena niisa 160 ny fitambarany..
Taorian'ny 1996 nanombohany tany Atlanta, najoron'i Azerbaijana ny Kaomity Nasiônaly Paralaimpika, tamin'io taona io ihany. Tamin'ny 2014, nanangana sampana ho an'ny ankizy ilay kaomity.
Lamiya Valiyeva avy amin'ny Tarika #AZE mankalaza ny nahazoany medaly #volamena sy ny nahavitany zavabita tsara indrindra vaovao tamin'ny Paralaimpika: 55.00 seg tamin'ny famaranana 400m sokajy vehivavy T13. #Tokyo2020 #Paralympics #ParaAthletics 📸: Lintao Zhang pic.twitter.com/lPpLOTMvX0
— Getty Images Sport (@GettySport) 4 Septembra 2021
Tao anaty antsafa iray ho an'ny media ao an-toerana, taorian'ny nahatongavany avy any Tokyo, i Lamiya Valiyeva nahazo medaly volamena sy volafotsy, nilaza tamin'ireo mpanangona vaovao fa tsy mbola io no tanjony farany. “Mbola hanomana tsara ireo lalao hatao any Parisy amin'ny 2024 aho. Tsy ny hanamontsana fotsiny ny zavabita tsara indrindra tamin'ny Paralaimpika no kendreko, fa ny zavabita erantany,” hoy ity atleta 19 taona ity izay nanamontsna ny zavabita tsara indrindra tamin'ny lalao Paralaimpika tamin'ny 400 metatra Vehivavy – sokajy T13 (ireo manana fahasembanana ara-pahitàna).